နှင်းဟေမာ: တောကင်းပုံသီး ဘာလချောင်ကြော်
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 1:44 PM
Ohhhh!!! My favourite!!! Will go and buy from indian store and cook for dinner tonight. :)
ငယ်ငယ်က ပုဇွန်နဲ့ ချက်ကျွေးလို့ ကင်းပုံသီးဆိုရင် ကြိုက်တဲ့စိတ်ဝင်နေတာ။
ဟင်းက ရှယ်ပါလား ...
ကင်းပုံသီးကို အဲလို ကြော်စားတာ ကြိုက်တယ်
ကျွတ်ကျွတ်လေး ၀ါးရတဲ့ အရသာက ဘယ်လိုလေးမှန်းမသိဘူး
နှင်းက ဟင်းချက်မကောင်းဘူးတာ ပြောတာကြည့်ရတာ စားချင်စရာလေးပါ။
ချက်ထားတာ သွားရေကျချင်လာတယ်.. ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လေ.. နောက်လဲ ချက်ဦးနော်
ကင်းပုံသီးကြိုက်တယ်။ စားချင်စရာလေး။ ခုတောင် ထမင်းပူပူလေးနဲ့ စားချင်လာပြီ။
တကယ့်ကို စားချင်စရာပါပဲ နှင်းရေ... ကိုယ်တိုင်က အချက်အပြုတ်မှာ အရည်အချင်းသုညဆိုတော့ တကယ်ကို အားလည်းကျမိပါတယ်။ လမ်းကြုံရင် တကယ်ဝင်စားမှာနော်...
(တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပို့စ်တင်ထားတဲ့နေ့လေးက အစ်မမွေးနေ့ ဖြစ်နေတာတွေ့ရတော့ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ကျေနပ်လိုက်သေးတယ်း)
မရောက်တာကြာလို့ အိမ်ဝင်ပြီး တောကင်းပုံသီး ဘာလချောင်ကြော် ၀င်စားသွားပါတယ်။
ဘာအခက်အခဲဘဲ ကြုံကြုံ ပျော်ရွှင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ မိနှင်းက ဟင်းချက်ကောင်းတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ၀ိုင်းနေမှာ မြင်ယောင်မိသေးတယ်။